Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo tanaasulay sabab ?
Iyadoo doorashada Madaxtinimo ee soomaaliya ay maanta dhaceyso ayaa waxaa jira Mid ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilkaasi oo ka tanaasulay musharaxnimadiisa kaasi oo ka hadlay sababta uu tanaasulay.
C/raxmaan Cabdi Sharkuur Warsame oo ah ninka tanaasulay ayaa waxa uu ku sheegay sababta uu uga haray doorashada inay tahay kadib markii aan arkay buu yiri qaabka doorshada u socoto iyo iydoo uu ku tilmamay in aysan aheyn mid u dhaceysa siidii la rabay. isagoona intaa raciyey in wada tashiyo uu samyeeyay kadib ay usoo baxday inuusan ka mid noqonin musharaxiinta xilkaasi u tartameysa.
Sidoo kale waxa uu sheegay C/raxmaan Cabdi Shakuur in sababaha uu u tanaasulay ay ka mid tahay in raga qaar ee u tartamaya Madaxtinimda dalka oo ay isticmalayaan hantida dowlada taas oo uu xusay in aan lagu qanci Karin.
Cabdi raxmanaan ayaa waxaa uu baaq ujeediyay Xildhibaanada Baarlamaanka ee dooranaya Madaxwaynaha Dalka waxaana uu ka codsaday in ay ka foojignaadaan Cida ay ku Aaminayaan Hugaanka Dalka ayna ka fiiriyaan Cida ay is leeyihiin Dalka waa ay ka saari kartaa Marxalada adag Ee uu ku jiro . Waxaa lagu wadaa in Saacadaha soo socdo ay ka bilaabato cod bixinta Madaxwaynaha dalka hugaamin doona 4 Sano Ee soo socota iyadoo looga fadhiyo Baarlamaanka Soomalia in ay soo doortaan Hugaan Daacad ah .